Published by ခေါင်ခေါင် under စိတ်ကူးတည့်ရာ on Saturday, November 29, 2008
ကျွန်မတို့တွေ အားလုံးလမ်းတွေလျှောက်ဖူးကြတယ်... ။ စမ်းတစ်ဝါးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ် သေသေချာချာ ရွေးပြီးမှ လျှောက်တဲ့လမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ တွဲခေါ်ပြီးလမ်းပြမယ့်သူ ရှိတဲ့အခါ ကျွန်မတို့လျှောက်လှမ်းသမျှ လမ်းတစ်လျှောက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေခြင်းများနဲ့ သွားချင်တဲ့ ရောက်ချင်တဲ့နေရာကို ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ကြမှာပဲနော်။ လမ်းမသိပဲ စမ်းတစ်ဝါးဝါး တစ်ယောက်ထဲသွားနေရတဲ့ သူထက်စာရင်ပေါ့လေ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး..။ ဒီရက်တွေမှာ ကျွန်မလမ်းတွေအကြောင်းပဲ စဉ်းစားမိနေတယ်။
ဒီနေ့တော့ရုံးဆင်းတဲ့ အခါကျွန်မ အိမ်ထိလမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါမှလမ်းလျှောက်မပြန်ဖူး.တဲ့အပြင် သွားရမယ့်ခရီးကလဲ သိပ်နီးနီးလေးမဟုတ်။ ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်း ၇ မှတ်တိုင် ၈ မှတ်တိုင်စာလောက်တော့ ရှိမယ်။ ပိုရင်လဲပိုမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလမ်းလျှောက်ပြန်မယ်။ တစ်ခါမှ မလျှောက်ဖူးလို့ စမ်းလဲလျှောက်ကြည့်ချင်တယ်။ မလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ အခါကျတော့လည်း တွေတဲ့ဘက်စ်ကား တက်စီးတာပေါ့။
ကျွန်မရုံးဆင်းတဲ့အခါ မိုးတွေက တိတ်ခါစ.ဒါပေမယ့် ဖွဲဖွဲလေး ကျနေတုန်း ။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ မိုးတွေအုံအုံမှိုင်းမှိုင်း ကိုမြင်တာနဲ့ စိတ်ကပါ အုံမှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်သွားမှာ...။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ လမ်းပဲလျှောက်ချင်နေမိတယ်။ မိုးရေတွေက လမ်းပေါ်မှာ နဲနဲစီတင်ကျန်နေတယ်။ သောကြာနေဆိုတော့Formal လဲဝတ်စရာမလို .. ကျွန်မရဲ့ ပင်ကိုစတိုင် တီရှပ်နဲ့ ဂျင်းနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး.. ။ လက်ကိုင်အိတ်ကို တစ်ခါမှ ကျွန်မပုခုံးမှာ မလွယ်တတ်..။ လက်ကနေပဲ ဖြစ်သလိုဆွဲရင်း လျှောက်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မခြေတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်း ကျွန်မခြေထောက်အောက်က ရေတွေက တစ်ဖက်ဖက်ဆီကိုကွဲကွာလွင့်စင်သွားတယ်။ ကျွန်မသဘောကျလို့ ဆတ်ဆတ်ကလေး လျှောက်တယ်။ ကျွန်မလမ်းသွားတဲ့အခါ ဘာကိုမှ သတိမထားတတ်တာ ကျွန်မအကျင့်။ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာတစ်ခုကလွဲပြီး ကျန်တာတွေ ဘာမှမသိသလို လိုက်လဲမကြည့်တတ်။ အခုလဲ ကျွန်မလမ်းလျှောက်နေပေမယ့် လမ်းဘေးဝဲယာဘာတစ်ခုမှ မမြင်။ ကျွန်မစိတ်နဲ့ကျွန်မကိုယ် လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်နေတာ....။
အခုလဲ.. ကျွန်မလမ်းလျှောက်သွားနေရင်းလွမ်းနေပြန်ပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့အိမ်ကိုလွမ်းတယ်။ မေကြီး ကိုလွမ်းတယ်။ လသာလမ်းကိုလွမ်းတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ ကိုလွမ်းတယ်။ အင်းထဲက လယ်ရှည်ရွာလေးကိုလွမ်းတယ်။ စတူဒီယိုထဲက နေ့တွေကိုလွမ်းတယ်။ အိုင်စီပွဲ ကြည့်ခဲ့တာတွေကိုလွမ်းတယ်။ ဘောလုံးပွဲကြည့်ခဲ့တာတွေလွမ်းတယ်။ မောင်လေးအငယ်ဆုံးလေးကိုလဲ လွမ်းတယ်။ ဟင်္သာတမြို့လေးကိုလဲ လွမ်းတယ်။ ကျွန်မကိုခွဲခွာသွားတဲ့ ကျွန်မ ရည်းစားကိုလဲလွမ်းတယ်။ ကျွန်မစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကိုလဲ လွမ်းတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းက အကြောင်းတွေလွမ်းတယ်။ တို့ဟူးနွေးပူပူလေး ကိုလွမ်းတယ်။ ကျွန်မကို အရမ်းနားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၁ ယောက်ကိုလွမ်းတယ်။
လွမ်းတယ်..လွမ်းတယ်.. အလွမ်းတွေ အများကြီးပဲ။
တွေ့လားကျွန်မလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လွမ်းနေတာ...။ နီးလာပြီ ကျွန်မအခန်းကိုပြန်ရောက်ဖို့ ။ စုစုပေါင်း ကျွန်မလမ်းလျှောက်ချိန် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် တိတိ။ ခြေထောက်လဲ မညောင်းဘူး၊ မောလဲမမောဘူး။ နောက်နေ့လဲ ကျွန်မလမ်းလျှောက်ပြန်မယ်။ အခုလိုပဲ လွမ်းပြီးတော့ပေါ့။
မောင်ရှင်းသန့် said... @ November 29, 2008 at 2:30 AM
ကလောင် သွား ထက်ထက် နဲ့ ရေးခြစ် ထားတဲ့ ပန်းချီကားကို ကြည့်နေရသလိုပဲဗျာ
မျက်လုံး ထဲမှာ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားမိတယ်ဗျ
Moe Myint Tane said... @ November 29, 2008 at 3:06 AM
" လွမ်းတတ်သူကို နှိပ်စက်ကလူပြုလို့
မခေါင်ခေါင်ရေ ငိုချင်ရက်ကို လက်တို့သလိုဖြစ်သွားပြီ။
လင်းဒီပ said... @ November 29, 2008 at 4:29 AM
အစ်ကိုဆို တခါတလေ..အိမ်သာဝင်ရင်းတောင် တစ်ယောက်တည်းလွမ်းရင် လွမ်းနေတတ်တာ...
ဆောင်းယွန်းလ said... @ November 29, 2008 at 9:21 AM
mgngal said... @ November 29, 2008 at 9:57 AM
မိုးသား said... @ November 29, 2008 at 10:23 AM
ငါကိုယ်တိုင် နင့်အနားက လိုက်လျှောက်နေရသလိုပါပဲဟာ..
ပြီးတော့ ငါလည်း လွမ်းသွားတယ်..
လေးဖြူရဲ့ ခဏလေးများကိုပါ သတိတရဖြစ်သွားစေတယ်..
ဒီအချိန် ဒီပို့စ်လေး ဖတ်လိုက်ရတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် ..ခေါင်
Anonymous said... @ November 29, 2008 at 12:21 PM
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လမ်းသလားချင်တာများ စာတစောင်ပေတစောင် ရေးနိုင်တာတော့ ချီးကျုးတယ်ဗျာ
ပြီးတော့ ကလေးမဟုတ်သူငယ်မဟုတ် ရေမစင် စင်အောင်ဆော့သေးတယ်။
အော်...... အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေများ အတင့်ရဲပါဘိ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေ နေတဲ့အိမ်ကိုတောင်လွမ်းတယ်ဆိုပဲ။
ပျူနိုင်ငံ said... @ November 29, 2008 at 1:51 PM
လမ်းလေးထဲကို တိတ်တိတ်လေး အလည်လာ
ဖြိုးငယ် said... @ November 29, 2008 at 4:07 PM
လမ်းများများလျှောက်တော့ လည်း ကျန်းမာရေးကောင်းတာပေါ့ ..
တစ်နေ့ကို ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ဆိုတော့ လုံလောက်ပါတယ် .. ဟတ်ဟတ် .. စတာနော် .. အေ၇းအသားကတော့ အရမ်းကောင်းတယ် ညီမရေ
လူသစ် said... @ November 29, 2008 at 4:19 PM
လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွမ်းစေဗျား။ ကားလမ်းဖြတ်ကူးနေရင်းတော့ အရမ်းမလွမ်းမိစေနဲ့။
မောင်ပိစိ said... @ November 29, 2008 at 10:53 PM
လသာလမ်းကို လွမ်းတယ်ဆိုတာ.. အနော့်ကိုပြောတာလား...
အိုင်စီမ၊ တို့ဟူးနွေးမ.. :P ဗြဲ.... ငပေါ..ခေါင်ခေါင်
လူလ said... @ November 30, 2008 at 12:12 AM
tharrhtoo said... @ November 30, 2008 at 1:35 AM
လမ်းပေါ်ကို တက်လျှောက်ကြည့်တော့ ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်
မရောက်တာကြာတော့ အလည်လာရင်း လက်လေးတွေ
- said... @ November 30, 2008 at 1:39 AM
သူမက လမ်းလျှောက်ပြီ လွမ်းတယ်
ကေလာကြီး said... @ November 30, 2008 at 1:59 AM
အင်း ... ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလည်း လုပ်ပီးသား .. ကျမ်းမာရေးလည်း ညီညွတ်တယ် .. လွမ်းလို့လည်း ရတယ်.. ဒါမယ့် ခလုပ်တိုက်မယ်နော် သတိထား ...
ခေါင်ခေါင် said... @ November 30, 2008 at 2:59 AM
မိုးမြင့်တိမ်---------------ငိုချင်ရက်လက်တို့ ဖြစ်သွားပြီလား.. လွမ်းသာ လွမ်းပါ။
လင်းဒီပ-----------------ဟုတ်ပါ့နော် ကိုဒီပ ကိုလွမ်းပိုတို့ မလွမ်းပိုတို့ ဖြစ်နေပြီ။
မောင်ငယ်--------------ကျေးဇူးပဲ အစ်ကို မောင်ငယ်။
ကိုမိုးသား---------------အင်း ခေါင်လဲ ခဏလေးများ သီချင်းကို သတိရတယ်။ ခေါင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်-------------------သင်္ဘောသီးရယ်.. ပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲ.. ကိုယ့်ဘာသာပျော်လို့ ဆော့တာပဲဟာကို။ ကိုယ့်အိမ် ကိုလွမ်းတာတောင် သူ့ကိုလွမ်းတယ်တဲ့ ... ဟီး ။
ကိုအောင်----------------- လမ်းလေးထဲကို အမြဲလာပါ ကိုအောင်။ တိတ်တိတ်လေး လာစရာ မလိုပါဘူး။
ဆောင်းယွန်းလ---------------ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုဆောင်း။ ခေါင့် ဘလော့ကို လင့်ထားချင်ရင် ခွင့်တောင်းဖို့တောင် မလိုပါဘူး။
ဖြိုးငယ်---------------အင်းပေါ့ ကျန်းမာရေးလဲကောင်းတာပေါ့။ ဟိ.. ကျေးဇူးပါပဲကိုဖြိုးငယ်ရေ။
ကလူသစ်---------------------ဟုတ်ကဲ့ ကလူသစ်. ကားလမ်း ဖြတ်ကူးနေတုန်းတောင် လွမ်းချင်နေသေးလို့ မနဲဆွဲထားရတယ် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်.. ဟီး။
ပိစိ--------------------စီဗုံး ခဏဖြုတ်ထားတာ.. ပြီးရင်ပြန်တပ်မယ်။ နင့်အဘ နင့်ကိုလွမ်းရမှာလား။ ငါ့ကို နာမည်ဖျက်ပေါင်း များပြီနော်..ဂျပိန် . ငပိမ..သေမယ်။
လူလ----------------မင်္ဂလာပါ. ခရီးသည်ကြီး.. ခေါင်လဲ အမြဲ ရောက်ပါတယ်.. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
သားထူး-----------------အဘ ဟွန်းအကျယ်ကြီး တီးလို့ဒီမှာ လန့်ဖြန့်သွားတာလေ..။ ရက်စက်ပါ့ အဘရယ်။ သူ့ဆီမှာ အခါ ၁၀၀ လောက်လာအော် မှ တစ်ခါ လောက် ရောက်လာတယ်။
ကိုဝင်းဇော်--------------------အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာပါလွမ်းတာလား..။ ခေါင့် ထက်သာသွားပြီ။
ကေလာကြီး--------------------------အေး ခလုတ်တိုက်တာလဲ ခဏခဏ ပဲ..။ အမှတ်လဲ မရှိဘူးလေ။ လမ်းလျှောက်ရင် ကောင်းကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး ဟိုကန်ဒီကန် သွားတာဆိုတော့.. ဟီး။
Upasaka said... @ November 30, 2008 at 3:01 AM
ခလေးမ လေး အရမ်းကေင်း တယ် ဟရေးထးတာ ကို ဒီလို လမ်းမျုိးးနဲ့
ဒီလိုအလွမ်းမျိုး ကိယ ငါ လေပီပြင် အောင်ခံစားဖူးတော့ ဒီစာက ငါ့ရင် ဖတ်ကို လာထိတယ် ဟ။
thinzar said... @ November 30, 2008 at 5:26 AM
ဖိုးဂျယ် said... @ November 30, 2008 at 8:21 AM
ရန်နိုင် said... @ November 30, 2008 at 8:51 AM
လွမ်းတဲ့ သူ တယောက်တိုးလာပီနော်
ညခင်းနဲ့လမင်း said... @ November 30, 2008 at 9:48 AM
လမ်း .ကိုဖတ်သွားတယ် မခေါင်ရေ
လမ်းမှာ အနဂတ်အတွက် ကောင်းသောလမ်းများ
thorn musem said... @ November 30, 2008 at 11:25 AM
လွမ်းရင်း လမ်းလျှောက်နည်းက တယ်ဟုတ်ပါလား....
ကိုယ်က အလုပ်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လစ်တာဆိုတော့ မလွမ်းရဲဘူးဟေ့....
Anonymous said... @ November 30, 2008 at 2:12 PM
မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅၀၀တိတိကို ဆုအနေနဲ့ ချီးမြုင့်နေပါတယ် မှားရင်တော့ ၂၀၀ပါ
ကဲ မြန်မြန်လာဖြေနော် လူမများခင်
မောင်သစ်ဆင်း said... @ November 30, 2008 at 8:33 PM
အို.. ၁ နာရီနဲ့ ၁၅ မိနစ် တိတိ.. သိပ်မကြာ လှတဲ့ အချိန်လေး.. ဒီအချိန်လေး အတွင်းမှာ ဘဝ တစ်ခုစာက အမှတ်ရ လွမ်းဆွတ် စရာတွေကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသွားတယ်.. အံ့သြဖို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ စိတ်၏ ခံစားချက်များ.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တောင် အဲလို လွတ်လပ်စွာ လျှောက်လှမ်းချင် သေးတော့..။
apyae1 said... @ November 30, 2008 at 11:02 PM
အနော်လည်း ဘွမ်းတယ် အဲ... လွမ်းတယ်ဗျာ
၀ါဝါခိုင်မင်း said... @ December 1, 2008 at 1:36 AM
မမလည်း လွမ်းသွားတယ် ညီမလေးခေါင်ခေါင် ရေ.
သူများလွမ်းရင် မမလည်းလွမ်းမိသွားတာပဲလေ. အဟေး
ဇိမ်ခံကားတွေ အကြောင်းလေးပဲရေးလိုက်ပါ ညီမလေး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်.. ညီမလေး ဘာကြိုက်တတ်သလဲဆိုတာလေးပဲသိချင်တာပါ...
မမ၀ါ က လက်ဆောင်ပေးမလို့ နော်..ဟဟား
အဲလိုထင်နဲ့.. မှားသွားမယ်လို့.. အဟီးး
pethein said... @ December 1, 2008 at 2:07 AM
စာဖတ်သူကို စလယ်ဆုံး ဆွဲဆောင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်-
ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးစတွေလိုမျိုး တင်ပြနိုင်မှုအရေးအသား အားလုံးဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။
su wai said... @ December 1, 2008 at 4:27 AM
အလွမ်းတွေနဲ့ လျှောက်တဲ့လမ်း…မပင်ပန်းဘူးဆိုပေမယ့် ခံစားရတာတော့ အမှန်ပဲ မဟုတ်လား ခေါင်ခေါင်ရေ…
တချို့အလွမ်းတွေက ချိုမြိန်တယ်…တချို့အလွမ်းတွေက ခါးသီးတယ်…တချို့အလွမ်းတွေက ကိုယ်တိုင်က မက်မက်မောမော ဖက်တွယ်ထားတာ…တချို့ကျတော့ မလွမ်းချင်ပေမယ့် လွမ်းမိနေတာ…
စာဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေးတွေပါ… ခေါင်ခေါင့်ရဲ့ အရေးအသားတွေကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။
ခေါင်ခေါင် said... @ December 1, 2008 at 7:26 AM
တစ်ကူးတစ်က မှတ်ချက်လေးများ လာပေးကြတဲ့ အစ်ကိုအစ်မ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ရှင့်.။
ညီအကိုများ said... @ December 1, 2008 at 8:55 AM
အိုင်လွယ်ပန် said... @ December 1, 2008 at 11:33 AM
မသက်ဇင် said... @ December 1, 2008 at 4:55 PM
Anonymous said... @ December 1, 2008 at 4:56 PM
ခေါင်ခေါင်ရေ တစ်ကယ့် ၀ါရင့် ဆရာမကြီး တစ်ယောက် အတိုင်းပဲ ရေးထားတာက တစ်ကယ်ကောင်းတယ် ..
ပိုပြီး ကောင်းကောင်းလာတယ် ..
နောက်ထပ်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားဖို့ အားပေးပါတယ်
တောင်ပေါ်သား said... @ December 1, 2008 at 8:28 PM
အမရေ ထပ်တူ လွမ်းရပါတယ်ဗျာ
Andy said... @ December 2, 2008 at 12:34 AM
လွမ်းလာဘီ... ကျွန်တော်လဲ လမ်းဆိုပြီး ရှောက်ဖူတယ် (ဂလောက်တော့ မလွမ်းရဘူးဗျာ)
paysatthu ပေးဆပ်သူ said... @ December 3, 2008 at 12:39 PM
ကိုဂစ်တာ said... @ December 4, 2008 at 9:10 PM
တွေးရင်း ငေးရင် လမ်လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း
ခဏလေးတွေးရင်း ခဏလေးငေးရင် ခဏလေးပဲ...
ရေးထားတာကိုဖတ်ရတော့ သီချင်းလေး ကိုပြန်သတိရမိတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ အက်ဆေးလေးပါ။